Maxamed Saalax oo ugu Hanjabay Liverpool inuu ka tagayo haddii ay qaadi waayaan Talaabadan….!!! – Gool FM
Maxamed Saalax oo ugu Hanjabay Liverpool inuu ka tagayo haddii ay qaadi waayaan Talaabadan….!!!
Byare June 11, 2018
(Europe) 11 Juunyo 2018. Warar dhawaan gal ah oo ka soo baxaya Spain ayaa tibaaxaya in Maxamed Saalax uu ugu goodiyay Liverpool inuu ka tagi doono xagaagan.
Wiilka reer Masar ayaa xilli ciyaareed cajiib ah la qaatay Jurgen Klopp iyadoo uu laacibkii hore ee Chelsea uu dhaliyay 44 gool dhammaan tartamada.
25-jirka aya la saadaaliyay inuu xagaaga ka tagi doono Anfield iyadoo ay jirto inuu Liverpool ku soo biiray sanadkii la soo dhaafay uun.
Real Madrid iyo Barcelona ayaa la sheegay inay hogaaminayaan tartanka loogu jiro wiilka Muslimka ah kaa oo Reds ku hogaamiyay Final ka Champions League.
Sida uu sheegayo warsidaha Don Balon, Saalax ayaa ka careysan Liverpool maadaama ay ka baxday heshiiska ay kula soo saxiixan lahayd Nabil Fekir.
Maxamed ayaa dareensanaa in Fekir uu noqon lahaa xiddiga ku haboon in lagu soo daro kooxda Klopp, Reds aya ka baxday heshiiska kaddib markii ay ogaadeen taariikhda dhaawaca uu jilibka ka qabo wiilka reer France.
Don Balon ayaa intaa ku dareysa in Saalax uu Liverpool siyay digniin kama dambeys ah – soo iibiya xiddig qadka dhexe oo weerar ah xagaagan ama waan idin ka tagayaa oo waxaan ku biirayaa Real ama Barca.
Laacibka reer Masar ayaa doonaya in kooxda reer England ay lacago badan qarash gareyso xagaagan si ay ugu tartamaan Premier League kal ciyaareedka soo socda.
Liverpool ayaa durba la soo saxiixatay labo xiddig xagaagan Xiddigaha qadka dhexe ee Fabinho iyo Naby Keita oo uga kala yimid Monaco iyo RB Leipzig.
Fekir, kaa oo heshiis shaqsi ahaaneed la gaaray Reds ayaa tijaabada caafimaad u maray Jimcihii.
Naadiga Lyon ayaa sheegtay inay iyagu ka baxeen heshiiska maadaama ay Liverpool miiska soo saari waysay lacagaha ay doonayaan, laakiin sababta rasmiga ah uu heshiiska u bur buray ayaa la wariyay inuu yahay dhaawaca uu laacibka jilibka ka qabo oo ay soo ogaatay kooxda reer England.
Halyayga kooxda Chelsea Craig Burley oo ka walwalsan in ay baxaan laba xidig ku sugan garoonka Stamford Bridge
Barcelona oo u diyaarineysa aduun dhan 200 milyan oo euros si ay u sameyso saxiixyada saddex xidig